Moyyaalee: Gamtaan Awurooppaa lammiilee Moyyaaleerra buqqa'aniif arjoome - BBC News Afaan Oromoo
Moyyaalee: Gamtaan Awurooppaa lammiilee Moyyaaleerra buqqa'aniif arjoome
13 Elba 2018
Gamtaan Awuroopaa gargaarsa lammiilee qe'eefi qabeenyasaniirraa buqa'uun gara biyya ollaa Keeniyaatti baqatanii jiraachaa jiraniif kan oolu deeggeersa maalaqaa gochuu beeksiisan.
Koomishiniin kun maallaqa Yuuroo kuma 100 ta'u kan arjoome wayita ta'u, gargaarsi namoomaa kun Waldaa Fannoo Diimaa Keeniyaatti kennama. Maallaqichis tajaajila fayyaa fi meeshaa manaa ittin guutuuf akka ooluus Gamtaa Awurooppaatti itti gaafatamaa dhimma gargaarsa namoomaa kan ta'an Piiteer Bergeers dubbataniiru.
Gargaarsi kun hir'ina jiru 'hanga tokko ni salphisa' jedhame akka kenname kan ibsan itti gaafatamaan kun, ''gartuun har'aa jalqabee Mooyyaaleetti argamuun haala jiru qoratu ni jiraatas jedhaniiru. Waan gartuun kun irra gahurratti hundaa'uun maallaqni dabalataa yoo barbaachises ni ilaalla,'' jechuun dubbataniiru.
Gargaarsi namoomaa kunis, namoota kuma 10 ta'aniifi buufataalee sadi keessatti argamaniif akka ooluus gamtaan kun dabalee beeksiiseera.
Humni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa ji'a tookkoon dura magaalaa Moyyaaleetti haleellaa jiraattoota nagaarratti baneen lubbu namoota kudhani galaafachuun walqabate, namoonni nageenyasaaniif sodaatan gara biyyatti ollaa Keeniyaatti baqachuun isaanii ni yaadatama.
Mootummaan Itoophiyaas odeeffannoo dogoggoraan ajjeechaan kun akka raawwate ibsuun, namoonni biyyaa baqatan gara qe'eesaanitti akka deebi'aniif waamicha godhus, ammallee 'lubbuu keenyaaf ni sodaanna' namoonni jedhan buufataalee jedhaman keessa jiraachaa jiru.
Dhaabbileen gargaarsaas, deggersi dabalataa buufataalee kanaaf akka barbaachisuu dubbachaa jiru.
Dhaabbata Woorlid Viizhiinitti bakka bu'aa kan ta'an Dankan Odaawoo, 'buufata kana keessa namoonni jiraatan kan nyaachisu hinjiru, bishannis isaan barbaachisa, tajaajjila fayyaas ni fedhu; nageenya daa'immanii, dubartootaa fi hadhoolii mirkaneessuuf eegumsi isaan barbaachisa. Kanaafuu ammallee deggeersi namoomaa barbaachisadha,'' jedhaniiru.
Itti dabaluunis, da'oowwan buqqaatonni kunneen keessa jiraatan yeroo gabaabaatti kan diigaman waan ta'eef, namoonni kooluu galuu barbaadan gara mooraa baqattootaatti deemuu akka jalqaban, warri biyyatti deebi'uu barbaadan ammoo ammarra qophii akka godhan angawoota nannootiin akka itti himame Dankan BBC'tti himaniiru.
Kooluu-galtoota fi baqattoota siyaasaa eegumsa mootummaa barbaadan
Rakkoo Moyaalee: Haala yaachisaa baqattoonni Moyaalee keessatti argaman
20 Bitooteessa 2018
'Riqicha uumamaa Hulluuqaa - lafa eebbifamaa'
Mormiin magaalaa Wondoo Gannat namoota sadii galaafate
Haadholiin kun maaliif daa'imman isaanii ajjeesu?
Simannaa ho'aa garee kubbaa miilaa Aljeeriyaaf taasifame
British Airways balaliinsa Kaayirootti taasisu hunda haqe
Qabxiin qormaataa akkamiin barattoota 23 galaafate?
Nyaanniifi saal qunnamtiin waliif maali?
Waraanni Faransaay barreessitoonni akka egeree raaganiif gaafate